बाढीले अर्को ऐतिहासिक धरोहर पनि धरापमा, २७ वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो कालीगण्डकी – Sapana Sanjal
June 16, 2021 133
Sapana Sanjal : काठमाडौं । लगातारको वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदीमा बढेको बहावले आसपासको क्षेत्र जोखिममा परेको छ । स्याङ्जा, गुल्मी र पर्वतको संगमस्थलमा रहेको सेतीबेनी बजार डुबानमा परेको छ । त्यस्तै रिडी, रानीमहललगायतका क्षेत्रमा पनि पानीको बहाव उच्च देखिएको छ । रानीमहल क्षेत्र वरिपरि डुबानमा परेको छ ।
तस्बिर बिमल पाण्डे
Prevअब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी !
Nextझापामा नेपाली कांग्रेसले एकल महिलालाई बनाइदियो घर
ओली सरकारको आइडिया : भारतलाई बालुवा र ढुंगा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने ! अर्थसचिव भन्छन्– भारत, माल्दिभ्स जुन कुनै देशलाई बेच्न सक्छौं